Profaịlụ ụlọ ọrụ - Huai 'An Hongyu Medical Equipment Co., Ltd.
Ahụike Hongyu njikwa mmaEmebere ngalaba iji nyochaa nnabata ngwa ọrụ ọ bụla, gụnyere ọdịdị, nha, nkenke, na ngwugwu. Nyocha niile ga-adịrịrị dị ka obodo dị n'okpuru ya na ụkpụrụ nke ime ya, chọrọ ndị ahịa ahịa pụrụ iche. Ọ kachasị maka mkpa ndị ahịa chọrọ nke iwu, ndị ọrụ njikwa ọrụ na-ewekarị nkọwa dị omimi, iji mezuo mkpa nke ndị ahịa kpamkpam. N'ụzọ dị otu a ngwa ọrụ ọ bụla sitere na Nrụpụta Ahụike Ahụike bụ ihe ndị ahịa anyị na-atụ anya ya. A ga-ahụta dị oke mkpa nye anyị, dị ka ọkachamara OEM / ODM ọkachamara na China.